Amagama awaziwayo - imvelaphi yawo kunye nenjongo
Amazwi | Uluhlu lweelwimi
Amantongomane kunye nama-bolts
"Hlaba njengenkukhu", "yima kwi-tube", "yenza usuku" - ezi ziintetho esilisebenzisayo kwimpilo yemihla ngemihla, singazi ukuba zivela phi. Nangona siyazi ukuba sithetha ntoni kuloo nto kwaye wonke umntu uyayiqonda intsingiselo yalo, kodwa ukuba ukhangele ngokugqithiseleyo izidalwa zezivakalisi, ngokuqhelekileyo zihlekisayo okanye azange zenze ingqiqo namhlanje.
Idioms - intsingiselo kunye nemvelaphi yazo
Amazwi amaninzi angayenza ngexesha lesimanje, ukuba abone kwakhona umfanekiso ocacileyo. Ezi zi binzana zanamhlanje zihlala zinganqobi kwaye sihlala sibuyela kwii-original. Ixesha lokujonga ngokuthe ngqo imvelaphi.
Amagama awaziwayo alula achaze
Idioms zizakhiwo zegama ezichanekileyo ezingenakutshintshaniswa izixhobo ezingenakutshintshi ngenxa yenye indlela umfanekiso wonke awusayi kuchaneka. Ukusuka "ukulala okuluhlaza okwesibhakabhaka" akunakwenzeka ukuba "Ubomvu ovela esibhakabhakeni ukuba ulale", kuba akukho mntu uyayiqonda oku kwaye akaqondi.
Idioms ziimpawu ezibonakalayo eziyaziwayo kwaye zixhomekeke kulwimi. Oku kuyafumaneka kwezinye iilwimi. Ngelixa 'livula' nathi, imvula eNgilani "Amakati kunye neenja" - oko kukuthi amakati neenja. Kulo lizwe, asiyikuqonda oku, eNgilandi, ngakolunye uhlangothi, umntu akaqondi iwele.
Siqokelele amabinzana aqhelekileyo kwaye sivakalelwa "kwizinyo". Apha ungakwazi ukuzibona apho izivakalisi eziqhelekileyo zinezizwe zabo.
"Imfundo ephakamileyo yesikolo i-alpha kunye ne-omega yokuqalisa umsebenzi," ugogo kaFrederike, ekhangeleka ngokukhathazeka ngamabanga omzukulwana wakhe. UFrederike uyazi ukuba akazange ahlaziye udumo lwakhe kwingxelo yonyaka-nyaka kwaye iimpendulo zezimvu ziza kuba ngcono kwiinyanga ezintandathu ezizayo.
Inqaku elithi "i-alpha kunye ne-omega" lithetha ntoni?
Emva koko ucela ugogo wakhe ukuba kutheni imfundo yesikolo yayiza kuba yi-alpha kunye ne-omega yokuqalisa umsebenzi. Ugogo uyaphendula: "Oku kuthetha ukuqala nokuphela. Ukuba uhlawula ngokukhawuleza esikolweni ukususela ekuqaleni, uya kugqiba ngeqondo elihle kwaye unokufunda nantoni na oyifunayo. "
Emva kwemini, uFrederike uya ekhaya ukuze abonise abazali bakhe amabakala. Uhlala ecinga ngesizathu sokuba umkhulu usethe i-A yokuqala kodwa u-O ekupheleni. Mhlawumbi wakho umkhulu akakwazi ukufunda nokubhala ngokufanelekileyo?
Umama kaFrederike kufuneka ahlekise le ngxelo yentombi yakhe aze athi:
"I-alfabhethi yesiGrike ine-A ye-Alpha njengencwadi yokuqala kunye ne-O ye-Omega njengobhaliso lokugqibela. Ibinzana livela ekuguquleleni kweBhayibhile nguMartin Luther. Kulo, uThixo uthi, "NdingumAlfa no-Omega, ukuqala nokuphela ..." La mazwi avela kwiSityhilelo sikaYohane uMama uyazi ukuthi: "Oko kuthetha; ngubani onokuqala kunye nokuphela kwento ebonakalayo, inkosi yephela. Ngaloo ndlela, amandla olwazi achazwa. "
UFrederike unomdla kakhulu kwaye unquma ukuba kwikamva ufuna ukugcina iliso kuyo yonke into kwaye aphucule amabanga akhe esikolweni.
Anke u buhlungu. Wayefuna ukuya kuma-movie kunye nomhlobo wakhe omhle namhlanje, kodwa waxoshwa ngomzuzu wokugqibela. UStefan, umzalwana omkhulu kaAnke, uzama ukumthuthuzela. "Emva koko uya kumabhayisikobho kusasa, akubi kubi."
Inqaku elithi "ingongoma ephambili" lithetha ntoni?
"Ngomso akusiyo imini ye-cinema kwaye ifilimu ibiza i-euro ezimbini ngaphezulu. Ingongoma, andinayo imali eninzi. "
Ayikho imeko enhle, kodwa kufuneka uhleke kwilizwi kwitekisi.
Iyiphi ingongoma ephambili? Ngaba iziphumlisi zithe zenyuka kwaye zisehla ngokuzonwabisa? Yaye ukuba kunjalo, yintoni enxulumene nale nkcazo?
Ibinzana libonisa ukuphuthuma okanye ukubaluleka. Ivela ku-Aristotle, oye waqonda ukuba kwipayipi leqanda leqanda lekhukhu isicatshulwa esincinci sibheka phezulu nangaphantsi xa inkukhu iphetha.
Ingongoma encinci yintliziyo kwaye ngoko ke ilungu elibaluleke kakhulu lenkukhu ekhulayo. Kwaye ngoko ilizwi elikwinqaku libonisa ukuba kubaluleke kakhulu apha.
Ukubiza imali isithende
Idiom Unwrap ibhere
Kuthetha ukuba kwi-180
Idioms - ndiza kubetha isorkork
Idioms - Yiba nebhodi phambi kwentloko yakho
Idioms - Ukwakha izakhiwo ezimangalisayo
IsiNgesi sichaza ngesiNgesi | ezihlekisayo